Tsvaga Bhaibheri Dzvene - Shona Bible SCLB
Shoko chairo (Nyaya Inonzwisisa)
Ine 2 Mazwi (Yakaparadzaniswa neComma)
Inosanganisira 1 Kunze kweMashoko maviri (Yakaparadzaniswa neComma)
Found 113 ~ Mateu, Mako, Ruka, John, Mabasa, VaRoma, 1 VaKorinte, 2 VaKorinte, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 VaTesaronika, 2 VaTesaronika, 1 Timoti, 2 Timoti, Tito, Firimoni, VaHebheru, James, 1 Petro, 2 Petro, 1 Johani, 2 Johani, 3 Johani, Judha, Zvakazarurwa
uyezve kuparidza gore renyasha dzaTenzi.”
Izwi akava munhu anenyama akagara pakati pedu azere nyasha nechokwadi. Takaona mbiri yake inokodzerana nomwana oga waBaba.
Kubva mumafashafasha enyasha dzake, takapiwa tose nyasha pamusoro pedzimwe nyasha.
Mutemo wakapiwa nokuna Mosesi nyasha nechokwadi zvikauya nokuna Jesu Kristu.
Vapositori vakapupurira zvokumuka kwaTenzi Jesu nesimba guru, uye nyasha huru dzaiva pavari vose.
Sitefani aiva azere nenyasha nesimba akaita zvishamiso zvikuru nezviratidzo pakati pavanhu.
Akamununura munhamo dzake dzose akamuitira nyasha. Akamupa ungwaru pamberi paFarao mambo weIjipiti. Iye Farao akamuitawo mutongi weIjipiti neweimba yake yose.
Paakasvika akaona nyasha dzaMwari akafara. Akavakurudzira vose kuti varambe vakatendeka vakati kwati kwati nomwoyo wose kuna Tenzi.
Pakapera musangano wapasinagogu, vaJudha vazhinji navanamati vaMwari vakanga vapindukira kuchiJudha, vakatevera Pauro naBhanabhasi vakataura kwavari vachivakurudzira kuti varambe vari munyasha dzaMwari.
Nokudaro vakagara kwenguva ndefu vachitaura nechivindi nezvaTenzi. Iyewo Tenzi, akapupurira Shoko rake renyasha nokupa kwaakaita zviratidzo nezvishamiso kuti zviitwe namaoko avo.
Kubva ipapo vakaenda nechikepe kuAndiyoku kuya kwavakaturirwa kunyasha dzaMwari zvichiitira basa irori ravakanga vachangopedza kuita.
Asi tinotenda kuti tichaponeswa nenyasha dzaTenzi Jesu sokuponeswa kwavachaitwa.”
Pauro akasarudza Sirasi. Vakaenda vapedza kukumikidzwa nevehama kunyasha dzaTenzi.
Paakasvika, akabatsira kwazvo vakanga vatenda nenyasha dzaMwari nokuti akapwisa vaJudha pachena achiratidza naMagwaro Matsvene kuti Jesu ndiye Mesia.
asi handiverengi upenyu hwangu sehune maturo kana kuti hwakakosha kwandiri chero ndikapedza chinhanho changu nebasa randakapiwa naTenzi Jesu rokupupurira Shoko Rakanaka renyasha dzaMwari.
Zvino ndinokukumikidzai kuna Mwari uye kuShoko renyasha dzake rinokwanisa kukuvakai nokukupai nhaka pakati pavakaitwa vatsvene.
Nokwaari ndakagamuchira nyasha dzebasa rokutumwa somupositori kuti ndiunze vanhu vamarudzi ose mukuteerera kwechitendero muzita rake
Ndinokukwazisai imi mose vadikanwi vaMwari vari muguta reRoma, vakadaidzwa kuti vave varurami. Mwari Baba vedu naTenzi Jesu Kristu ngavakuitirei nyasha nokukupai rugare.
Vanoruramiswa nenyasha dzake sechipo nokununura kunowanikwa muna Kristu Jesu.
Saizvozvo chitsidzo ichocho chakaitwa pamusana pechitendero kuitira kuti chive chenyasha uye kuti zvibva zvanyatsosimbisiswa kuti zvizvarwa zvavo zvose zvichachiwana kwete kuna vanochengeta mutemo voga asi kuti kuna avowo vane chitendero chimwechetecho naAbhurahamu, nokuti iye ndibaba vedu tose
nokwaari tiitirwe nyasha sezvatiri. Tinofara nechitarisiro chembiri yaMwari.
Chipo chenyasha hachina pachingamboenzaniswa napo kukura nechitadzo chiya, nokuti kana vanhu vazhinji vakafa pamusana pechitadzo chomunhu mumwechete, ko kutozoti nyasha dzaMwari nechipo chinopiwa pachena, pamusana penyasha dzomunhu mumwechete uya, Jesu Kristu, chinofashurirwa zvakadii kuvanhu vakawanda.
Kana pamusana pechitadzo chomunhu mumwechete rufu rwakatonga nomumunhu mumwechete iyeyo, zvino vachatonga noupenyu zvakanyanya sei nomumunhu mumwechete Jesu Kristu avo vanogamuchira nyasha dzakawanda nechipo chinongopiwa pachena choururami.
Mutemo wakapindira kuzowanziridza kutadza asi nokuwanda kwakaita zvitadzo nyashawo dzakabva dzawanda zvikuru kwazvo.
Izvi zvakaita kuti sokutonga kunoita chitadzo norufu nyashawo dzitonge nokururama kusvikira kuupenyu husingaperi nokuna Jesu Kristu Tenzi wedu.
Zvino totiiko? Toramba tiri muchitadzo here kuti nyasha dzifashukire?
Chitadzo hachizokutongai nokuti hamusi pasi pomutemo asi muri pasi penyasha.
Ko zvino topara zvitadzo pamusana pokuti hatisi pasi pomutemo asi pasi penyasha here? Handizvo.
Saizvozvowo iye zvino uno kune chitsama chakasarudzwa nokuda kwenyasha.
Zvino kana zviri nokuda kwenyasha, hazvisiri nokuda kwamabasa nokuti nyasha hadzizovi nyasha.”
Pamusana pechipo chandakapiwa nenyasha dzaMwari ndinoda kudzora munhu oga oga pakati penyu kuti arege kuzvitora soopamusoro kupinda zvaari asi nepfungwa dzakagadzana kuzviera maererano nechitendero chaakapiwa naMwari.
Tine zvipo zvakasiyana — siyana maererano nenyasha dzatakapiwa; ngatizvishandisei. Kana chiri chipo chokuporofita, tinofanira kuporofita zvinofambirana nechitendero chedu.
Ipapo Mwari worugare anobva apwanyira Satani pasi petsoka dzenyu. Dai Tenzi wedu Jesu Kristu angokuitirai nyasha.
1 VaKorinte 1:3
Chikomborero chokuitirwa nyasha nokuwaniswa rugare dai changova nemi chichibva kuna Mwari Baba vedu nokuna Tenzi Jesu Kristu.
1 VaKorinte 1:4
Ndinotenda Mwari nguva dzose pamusana penyu nokuda kwenyasha dzaMwari dzamakapihwa muna Kristu Jesu,
1 VaKorinte 3:10
Nenyasha dzandakapiwa naMwari ndakavaka hwaro somuzivi chaiye wokuvaka. Mumwe ndiye ari kuvaka pasoro pahwo. Munhu wose ngaatozvingwarira kuti anovaka sei pahuri.
1 VaKorinte 7:25
Kuna vasina kuwana handina mutemo waTenzi asi ndinokupai zvandinofunga somunhu anovimbika chiri chipo chenyasha dzaTenzi.
1 VaKorinte 15:10
Asi nenyasha dzaMwari ndiri zvandiri. Nyasha dzake kwandiri hadzina kushaya basa. Zvakatoitika ndezvokuti ndakashanda zvakaomarara kupinda vose. Kunyange zvazvo ndakanga ndisirini asi nyasha dzaMwari mandiri.
1 VaKorinte 16:23
Nyasha dzaTenzi Jesu ngadzive nemi.
2 VaKorinte 1:2
Mwari Baba wedu naTenzi Jesu Kristu ngavakuitirei nyasha nokukupai rugare.
2 VaKorinte 1:12
Chatinodada nacho uye chinopupurwawo nehana yedu ndechichi chokuti takagarisana navamwe zvakanaka panyika asi zvikuru nemi, tiri vatsvene nokuva pachokwadi chaMwari. Hatina kuzviita noungwaru hwapasi pano asi nenyasha dzaMwari.
2 VaKorinte 4:1
Naizvozvo, Mwari, nenyasha dzake, zvaakatipa basa iri hatirasi mwoyo.
2 VaKorinte 4:15
Zvose izvi kuitira imi, kuti nyasha nokupararira kwadzinoita kuvanhu vakawanda kutendawo kuwande, kuti Mwari agorumbidzwa nazvo.
2 VaKorinte 6:1
Tinokukumbirisai tichishanda pamwechete naMwari kuti murege kungogamuchira nyasha dzaMwari pasina
2 VaKorinte 8:1
Tingade kuti muzive, hama dzangu, nezvenyasha dzaMwari dzakaratidzwa mumasangano okuMasedhonia
2 VaKorinte 8:7
Zvino sezvo makabudirira zvikuru muzvinhu zvose izvi zvinoti: chitendero, kwouya kutaura zvakanaka kwoti ruzivo kwozoti shungu dzenyu huru dzokuda kubatsira uyezve rudo rwenyu kwatiri, chibudiriraiwo zvakanyanya pabasa iri renyasha.
2 VaKorinte 8:9
nokuti imi munoziva nyasha dzaTenzi wedu Jesu Kristu kuti kunyange akanga akapfuma asi akazova murombo nokuda kwenyu kuti nourombo hwake imi mugova vapfumi.
2 VaKorinte 9:14
Ivo vachikusuwai nokukunamatirai pamusana penyasha dzinoshamisa dzaMwari mamuri
2 VaKorinte 12:9
asi akati, “Nyasha dzangu dzinokwana kwauri nokuti simba rangu rinoonekwa muutera kushanda kwaro kuzere.” Naizvozvo ndinotofara kudada noutera hwangu kuti simba raKristu rigare pandiri.
2 VaKorinte 13:13
Vatsvene vose vanokukwazisai. Chikomborero chokutirwa nyasha naTenzi wedu Jesu Kristu norudo rwaMwari nokuwadzanisa kwaMweya Mutsvene ngachive nemi.
chikomborero chokuitirwa nyasha necherugare ngachigare nemi chichibva kuna Mwari Baba nokuna Tenzi Jesu Kristu.
Munondishamisa kuti mavakusiya nokukurumidza kudai iye akakudaidzai nenyasha dzaKristu muchipindukira kune rimwewo Shoko Rakanaka.
Zvino iye zvaakanga andisarudza ndisati ndaberekwa akandidaidza nenyasha dzake.
Handisi kuramba nyasha dzaMwari nokuti kana kururamiswa kuchiitwa nomutemo Kristu akafira pasina.
Imi munoda kururamiswa nezvisungo zvomutemo makatochekana ukama naKristu, nyasha dzakatokupesai.
Chikomborero chokuitirwa nyasha naTenzi wedu Jesu Kristu ngachive nemi hama dzangu. Ameni.
Mwari Baba vedu naTenzi Jesu Kristu ngaakuitirei nyasha akupei rugare.
kuti Mwari arumbidzwe pamusana penyasha dzake dzisingatauriki dzaakatiitira nokuMwanakomana wake wapamwoyo pasina muripo.
Nokwaari takawana ruponeso neropa rake rwokuregererwa zvikanganiso zvedu, maererano nokuwanda kwenyasha dzake
kunyange patanga takafa nokuda kokutadza kwedu, akatiita kuti tive vapenyu pamwe naKristu. Makaponeswa nenyasha.
kuti mumazuva achauya, norudo rwake, aratidze upfumi husingaverengeki hwenyasha dzake kwatiri muna Kristu Jesu.
Pamusana penyasha makaponeswa nechitendero, asi musiri imi munozviponesa; chipo chaMwari,
Ndinofunga kuti makanzwa zvebasa renyasha dzaMwari routariri randakapirwa imi,
Ini ndakaitwa mushandiri weShoko Rakanaka iroro maererano nechipo chenyasha idzodzo dzaMwari dzandakapiwa nokushanda kwesimba rake.
Kunyange zvangu ndiri mudukuduku wokupedzisirira kuna vatsvene vose, nyasha idzi dzakapiwa kwandiri kuri kuti ndiparidze vechirudzi upfumi husingatauriki hwaKristu
Mumwe nomumwe wedu akapiwa nyasha zvichienderana nokukura kwechipo chaakapiwa naKristu.
Dai vose vanoda Tenzi Jesu Kristu norudo rusingaperi vangoitirwa nyasha.
Mwari Baba vedu naTenzi Jesu Kristu ngavakuitirei nyasha vakupei rugare.
Munogara muri mumwoyo mangu mose zvenyu. Naizvozvo zviri pamwerowo kuti ndifunge kudai nezvenyu nokuti tinogoverana nyasha muusungwa hwangu uye mukurwira kusimbisa Shoko Rakanaka.
Jesu Kristu ngaakuitirei mose nyasha.
takunyorerai imi vokuKorose, vatsvene uye hama dzakatendeka muna Kristu. Mwari Baba wedu ngavakuwanisei nyasha norugare.
rakasvika kwamuri. Sezvariri kungoitawo pasi pose kubereka muchero richipararira, ndozvariri kuitawo pakati penyu kubvira pazuva ramakarinzwa mukanzwisisa nyasha dzaMwari nechokwadi chezvariri
Ndini Pauro ndinonyora noruoko rwangu ndichikukwazisai. Yeukai ngetani dzangu. Nyasha ngadzive nemi.
1 VaTesaronika 1:1
Ndini Pauro naSirivhanusi naTimoti tinokunyorerai imi sangano rokuTesaronika muna Mwari Baba naTenzi Jesu Kristu. Nyasha norugare ngazvive nemi.
1 VaTesaronika 5:28
Tenzi Jesu Kristu ngaakupei chikomborero chenyasha dzake.
2 VaTesaronika 1:2
Nyasha norugare ngazvive nemi zvichibva kuna Mwari Baba nokuna Tenzi Jesu Kristu.
2 VaTesaronika 1:12
izvi kuri kuitira kuti zita raTenzi wedu Jesu rirumbidzwe mamuri imiwo murumbidzwe maari maererano nenyasha dzaMwari wedu nedzaTenzi Jesu Kristu.
2 VaTesaronika 2:17
nenyasha ngaakunyaradzei mwoyo yenyu aisimbise mumashoko nomumabasa ose akanaka.
2 VaTesaronika 3:18
Tenzi Jesu Kristu ngaakupei mose chikomborero chenyasha dzake.
1 Timoti 1:2
ndinokunyorera iwe Timoti mwana wangu chaiye muchitendero. Dai Mwari Baba naKristu Jesu Tenzi wedu akukomborera nenyasha nengoni norugare.
1 Timoti 1:14
Nyasha dzaTenzi dzakawodzvorerwa pandiri nokutenda norudo rwatinarwo muna Kristu Jesu.
1 Timoti 6:21
Vamwe vakatevera izvozvo vakarasika gwara rechitendero. Chikomborero chenyasha ngachive nemi.
2 Timoti 1:2
ndinokunyorera iwe Timoti mwana wangu wapamwoyo ndichiti: Dai Mwari angokupa chikomborero chenyasha nengoni norugare zvichibva kuna Mwari Baba naKristu Jesu Tenzi wedu.
raiye akatinunura akatidaidza nokudaidza kunoera, kwete nokuda kwamabasa edu asi pamusana pezvirongwa zvake uye pamusana penyasha dzake dzaakatipa muna Kristu Jesu karekareko.
2 Timoti 2:1
Naizvozvo iwe mwanangu chisimba uchibatsirwa nenyasha dzatinowana muna Kristu Jesu.
Tenzi ngaave newe. Chikomborero chenyasha ngachive newe.
Ndiri kunyorera iwe Titosi mwana wangu chaiye muchitendero chimwetecho neni. Dai wangowana chikomborero chenyasha norugare zvichibva kuna Mwari Baba nokuna Kristu Jesu mununuri wedu.
Chikonzero chacho ndechokuti nyasha dzaMwari dzakaratidzwa pachena kuti vanhu vose vaponeswe
kuti tiruramiswe nenyasha dzake tichiva vagari venhaka nechitarisiro choupenyu husingaperi.
Vose vandinavo vanokukwazisa. Ndikwazisirewo vaya vanotida muchitendero. Chikomborero chenyasha ngachive nemi mose.
Nyasha norugare ngazvive nemi zvichibva kuna Mwari Baba vedu nokuna Tenzi Jesu Kristu.
Tenzi Jesu Kristu ngaape chikomborero chenyasha kumweya wenyu.
Asi tinoona Jesu, iye akamboitwa muduku panavatumwa kwechinguvana achidzikwa chiremba chembiri nokukudzwa, pamusana pamarwadzo erufu kuti anzwe chinonzi rufu nenyasha dzaMwari, achifira munhu wose.
Naizvozvo ngatiswederei nechivimbo pedyo nechigaro choumambo chenyasha, kuti tinzwirwe ngoni tigowanawo nyasha dzinotibatsira nenguva yatinenge toda rubatsiro.
nokuti ndichavanzwira nyasha pazvitadzo zvavo uye zvitadzo zvavo handichazombozvirangaririzve.
Ko kutozoti munhu anotsokodzera Mwanakomana waMwari achin'oresa ropa rechitenderano rakamuita mutsvene achishatirisa Mweya wenyasha, acharangwa zvakaipisisa sei?
Chenjerai kuti pasava nomunhu anotadza kuwana nyasha dzaMwari kuti parege kuva nomudzi unovava ungakure ukakonzera nhamo uchikonzera vazhinji kun'oreswa;
Chinhu chakanaka kusimbiswa mwoyo nenyasha kwete nemitemo yezvokudya isina kumbobatsira vanoichengeta.
Chikomborero chenyasha ngachive nemi mose. Ameni.
asi anopa nyasha dzakatowanda.” Ndosaka Magwaro Matsvene achiti, “Mwari anopikisana navanozvikudza achipa nyasha dzake kune vanozvininipisa.”
1 Petro 1:2
imi makasarudzwa mukanzi naMwari Baba mururamiswe naMweya kuitira kuti muteerere Jesu Kristu uye kuti musaswe neropa rake. Dai mangowaniswa chikomborero chenyasha dzakawanda norugare ruzere.
1 Petro 1:10
Vaporofita vakaporofita nezvenyasha dzaizova dzenyu, vakatsvagisisa vakafeya — feya nezvoruponeso irworwu.
Mupfungwa dzenyu, sungai dzisimbe. Zvibatei; isai chivimbo chenyu chizere panyasha dzichauya kwamuri pacharatidzwa Jesu Kristu.
1 Petro 5:5
Naizvozvowo nemi vadiki vacho ivai pasi pavakuru — vakuru. Pfekai mose kuzvidukupisa mumwe achizvininipisa kune mumwe nokuti Mwari anorwisana navanozvikudza achitsigira nenyasha vanozvininipisa.
Mushure mokunge mambotambudzika kwechinguva, Mwari wenyasha dzose, iye akakudaidzai kumbiri yake isingaperi muna Kristu, iye pachake achakudzorerai kuva zvamunofanira kunge muri, mudzike midzi, achikusimbisai.
1 Petro 5:12
Ndakunyorerai muchidimbu ndichibatsirwa naSirivhanusi, hama yakatendeka sokuona kwangu, ndichikukuridzirai ndichitaura pachena kuti idzi inyasha dzaMwari chaidzo; rambai makasimba madziri.
2 Petro 1:2
Dai mangowana chikomborero chenyasha dzakawanda norugare ruzere mukuziva kwamunoita Mwari uye Jesu Tenzi wedu.
Asi rambai muchingokura munyasha noruzivo rwaTenzi wedu noMuponesi Jesu Kristu. Iye ngaarumbidzwe zvino nokusingaperi. Ameni.
2 Johani 1:3
Nyasha netsitsi norugare ngazvive nesu zvichibva kuna Mwari Baba uye kuna Jesu Kristu Mwanakomana waBaba muchokwadi uye murudo.
Pana vamwe vanhu vakapinda pakati penyu zvomuchivande. Vanhu ivavo vakatemerwa kare kare kurangwa kwavo ikoko. Vanhu vasiri vatendi vaMwari vanosandura nyasha dzaMwari wedu kuti vawane maitiro ounzenza vachiramba Changamire naTenzi wedu mumwechete, Jesu Kristu.
Rambai muchingodana naMwari. Rambai makangotarisira kuti Tenzi Jesu Kristu achakuitirai nyasha dzinokusvitsai kuupenyu husingaperi.
Ndini Johani ndinokunyorerai imi masangano manomwe okuAsia ndichiti: Dai chikomborero chokuitirwa nyasha nokuwaniswa rugare changova nemi chichibva kuna iye aripo, akanga aripo uye achazovapo, uyewo chichibva kumweya minomwe iri pamberi pechigaro chake choumambo,
Chikomborero chokuitirwa nyasha naTenzi wedu Jesu ngachive navanhu vose. Ameni.